(1) An Information Session of Japan Women’s University will be held on 10th March 2018 at BIY Business Institute Yangon. For more details, click on HOT NEWS tab of the page. (2) Those who had taken JLPT 2017 Dec (Ygn) Exam can draw certificates from MAJA during the period of 26 Feb 2018 and 26 Feb 2020. For detain information, click on HOT NEWS tab of the web page.
ဂျပန်အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ် (Japan Women’s University) မှ ပညာတော်သင်ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်အနား
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသော အမျိုးသမီးအဆင့်မြင့် ပညာရေးကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ဂျပန်အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ် (Japan Women’s University) မှ ပညာတော်သင်သွားရန် နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးမှုများ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ရက်စွဲ - ၁၀.၃.၂၀၁၈ (စနေနေ့)
အချိန် - နံနက် ၉း၃၀မှ နေ့လည် ၁၂း၀၀ အထိ
သင်ကြားပို့ချမည့်ခေါင်းစဉ် - Study Abroad at JWU and Later Career
ကျင်းပမည့်နေရာ - BIY Business Institute Yangon
အမှတ်(၂၇)၊မြေညီထပ်၊ တိုက်(E)၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
စာရင်းပေးသွင်းရန်နှင့် စုံစမ်းမေးမြန်းရန်းMyanmar Association of Japan Alumni (MAJA)
JLPT 2017 Dec (Ygn) တွင်ဖြေဆိုထားသော စာမေးပွဲအတွက် Certificates များ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေငြာခြင်း
ရန်ကုန် တွင် တွင်ဖြေဆိုထားသော JLPT 2017 Dec (Ygn) စာမေးပွဲ ၏ Certificates များကိုအောက်ဖော်ပြပါ နေရာများတွင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
*** JLPT 2017 Dec Certificate များကို 26.2.2018 မှ 26.2.2020 အတွင်းသာထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
သတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ပါက ထုတ်ယူနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်။
စတင်ထုတ်ယူလို့ရမည့်နေ့ရက်။ ။ 26.2.2018 မှ 26.2.2020 အတွင်းသာ
နေရာ ။ JLPT, C 317 B, 2nd Floor, Building -C, Pearl Condo, Bahan
09 962751373, 09 262602121
အချိန် ။ 9:30 မှ 4:00　(12:00 မှ 1:00 အထိ ထမင်းစားနားခေတ္တပိတ်ပါသည်။)
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်များပိတ်ပါသည်။
စတင်ထုတ်ယူလို့ရမည့်နေ့ရက်။ ။ 6.3.2018 မှ 6.3.2020 အတွင်းသာ
နေရာ။ ။ Hito Center
12လမ်းနှင့် လမ်း 80ထောင့် ၊ မန္တလေးမြို့
02 31762, 09258839428
အချိန် ။ 9:30 မှ 4:30
**အောင်လက်မှတ် ထုတ်ယူရာတွင် Test Voucher များကို မမေ့မလျော့ ယူခဲ့ပေးပါရန် **